Museveni oo Markii lixaad u tartamaya xilka madaxtinimada.(Warbixin) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Museveni oo Markii lixaad u tartamaya xilka madaxtinimada.(Warbixin)
On Feb 25, 2019 242 0
Xisbiga talada haya ee dalka Uganda ayaa dhawaan kulan ay isugu yimaadeen xubnaha xisbigaas waxay isku raaceen in Yuweri Museveni uu noqdo musharaxa xisbiga ku matalaya doorashooyinka madaxtinimada ee sannadka 2021-ka.
Museveni oo ah nin waayel 74 jir ah, sidoo kale-na ah Baadari ay ku xiranyihiin dad farabadan oo kiristan ah, ayaa kamid ah kaligii taliyaasha ugu muuqda ee wadamada dhaca bariga qaaradda Africa.
Musharaxnimadiisa waxay timid, kadib kulan dheer oo shan maalmood uga socday golaha fulinta ee xisbiga hotel ku yaala mandiqadda loo dalxiis tago ee Murchison Fall ee magaalada Kampala.
Warbaahinta dalka Uganda ayaa shaaca ka qaaday in go’aanka xisbiga talada wadanka haya uu ka caraysiiyay guud ahaan shacabka iyo mucaaradka, kuwaas oo u arka musharaxnimada Yuweri mid lagu doonayo in talada dalka ay isaga gacanta ugu sii jirto inta uu noolyahay.
Banaanbaxyo ka dhacay magaalada Kampla ayay dadka Yugaandheeska ah ku muujiyeen iney kasoo horjeedaan musharaxnimadiisa, waxaana meelaha qaar dadka careysan la hadlay hogaamiyaal katirsan mucaaradka.
Go’aanka uu qaatay xisbiga haya talada dalka Uganda ayaa waxaa horudhac looga dhigay qaraar uu sanadkii 2017-ka meel mariyay baarlamaanka dalkaas, kaas oo lagu laalay sharci xadidaya da’da musharaxa u tartamaya xilka madaxtinimada.
Mucaaradka dalka Uganda ayaa u arkay arinkan mid ka dhigan in madaxweynaha dalkaas uu sii ahaan karo hogaamiye inta uuu noolyahay, maadaama meesha laga saaray sharcigii xadidayay da’da musharaxa.
Dalka Uganda ayaa lagu tiriyaa inuu kamid yahay wadamada ugu xun marka laga hadlo waxa loogu yeero xuquuqda Insaanka, waxaana dalka ka jira talis milliteri oo aan ogoleyn in talalada gacantiisa ka baxdo.
Diraasad dhawaan uu baahiyay markazka Xuquuda Aadanaha iyo Nabadgeliyada, xaruntiisana ku taallo magaalada caasimadda ee Kampala ayaa lagu sheegay in xaaladda dalka Uganda ay tahay mid aad u liidato, marka laga hadlo xurriyada fakarka.
Waxay diraasadu hoosta ka xariiqday in dalka uu lugaha kula jiro dhibaatooyin ragaadiyay bulshada, oo ka imaaneysa ciidamada milliteriga, kuwaas oo faragelin muuqata ku haya adeegyada bulshada.
Ciidamada ayaa ku kaca gabood fallo sharci darro ah oo ay u geysanayaan shacabka, xilliyada ay socdaan banaanbaxyo looga soo horjeedo Yuweri Museveni, waxayna diraasadu sheegtay in milliterigu qaatay kaalintii ciidamada Police-ka.
Uganda waxaa Soomaaliya ka jooga kumanaan askari oo qeyb ka ah ciidamada shisheeyaha AMISOM ee duulaanka ku jooga dalkan, waxaana mushaaradka ciidamadaas ay ka dhagan yihiin miisaaniyad weyn oo lagu hago dowladda.
Shisheeye badan oo African ah waxay Soomaaliya u arkaan meel laga sameyn karo dakhli ballaaran, waana taas sababata keeneysa in dowladaha qaar ay ka biya diidaan in ciidamadooda kala baxaan dalka Soomaaliya iyagoo waliba bil kasta ay helayaan tira koobka khasaaraha ciidamadooda ku gaaraya Soomaaliya.
Arinta la yaabka leh ayaa ah in ciidamada Uganda ay dhibaato badan ka geystaan wadankooda iyagoo gumaada dadkooda, waxaana is weydiin mudan sababta keentay in sida ay sheegteen ay nabad ilaaliyaal u noqdaan bulshada muslimka ah ee Soomaaliyeed, maadaama ay dadkoodii buudka kula tunteen islamarkaana xasuuqeen!.
Halkan ka dhagayso Warbixin ku aadan Musharaxinimada Yuweri Museveni iyo siday u arkaan Shacabka iyo Mucaaradka.